दाङ कांग्रेसको सभापतिमा मेरो चर्चा हुनु स्वभाविक हो, दाङको विकासमा शंकर र महराजि मेरो जत्तिको योगदान नै छैन–राजु खनाल, – जागरण अनलाइन
दाङ कांग्रेसको सभापतिमा मेरो चर्चा हुनु स्वभाविक हो, दाङको विकासमा शंकर र महराजि मेरो जत्तिको योगदान नै छैन–राजु खनाल,
२०७५ चैत्र १७, आईतवार २२:५० मा प्रकाशित
राजु खनाल, युवा नेता एवम् पूर्वसांसद, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वसांसद राजु खनालले कम्युनिस्टहरूका कारण उपलब्धि गुम्ने अवस्था आएको बताउँछन् । कांग्रेसभित्रको विवादलाई छिटो समाधान गरेर कम्युनिस्टहरूसँग गाउँदेखि नै वारपारको लडाइँ लड्ने बेला आएको उनी बताउँछन् ।
दाङ कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेका खनालले दाङका सिनियर नेताहरूको सल्लाह, निर्देशन र सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छन् ।
दाङमा बढदै गएको कम्युनिस्टहरूको झुठको खेतीबाट जनतालाई सचेत गराउने दायित्व कांग्रेसको काँधमा आएको युवा नेता खनालले बताएका छन् । कांग्रेसका युवा नेता राजु खनालसँग रिएको कुराकानीको सम्पादित अँश :
दाङ कांग्रेसको राजनीति के भइरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेसले दाङमा आफ्ना गतिविधिहरू गरेर गईरहेको छ । क्षेत्रीयस्तरमा होस् वा जिल्ला कार्यसमितिले गर्ने कार्यक्रमहरू र समय समयमा केन्द्रीयबाट आउने कार्यक्रम जिल्लाका साथीहरूले गर्नुभएको छ । भेटघाट गर्ने र आफ्ना कार्यक्रमहरू नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्झाउने गर्नुभएको छ । निर्देशन दिने काम भएका छन् ।
जनतालाई अहिलेको परिस्थिति सम्झाउने देश कसरी गईरहेको छ ? सत्ताधारी दलहरूले देश कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ? विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रममा विगत र अहिलेको अवस्था के अवस्था छ ? कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको बेला के अवस्था थियो ? अहिले कुन अवस्था भईरहेको छ ? कसरी विकासका बजेटहरू गईरहेका छन् ? तीबारेमा जनतालाई सचेत गराउने । किन भने विगतको तुलनामा त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित मान्छेहरू, त्यो जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अहिले कोही मुख्यमन्त्री छन्, कोही सभामुख छन् ।
तर, पनि सोँचे अनुसारको बजेट दाङमा जान सकेको छैन । विगतमा हामी सांसद भएका बेला जति विकास निर्माणका काम भए, अहिले त्यति काम पनि हुन सकेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा खेरी जनतामा जुन आश्वासन उनीहरूले दिएका थिए त्यो अनुसारको कामहरू पूरा हुन सकेको छैन । दाङमा सबै राजनीतिक दलहरूले माग गरेको भनेको प्रदेशिक राजधानीको कुरा थियो । अहिले राजधानी यतिसम्म भन्नुभयो कृष्णबहादुर महराले त आठौं प्रदेश बनाएर भएपनि दाङलाई हामी राजधानी बनाउँछौँ भन्नु भएको थियो ।
अहिले उहाँहरूको दुई तिहाइको बहुमत छ । र, बैधानिक व्यवस्था पनि दुई तिहाइले जहाँ चाह्यो त्यहीँ निर्णय हुन सक्छ । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री पनि हाम्रै जिल्ला र हाम्रै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसलाई अगाडि निर्णय गर्ने अवस्थामा पु¥याउनेभन्दा पनि उहाँहरूले यसलाई एउटा लिङ्गेरिङ गराएर पछाडि धकेलेर लिएर जाने रणनीतिमा लागेको अहिले दङ्गाली जनताहरूले बुझेका छन् ।
दाङ कांग्रेसको गतिविधि शून्य भयो । गुट उपगुटका कारण दाङमा कांग्रेस कमजोर भयो भन्छन् । अवस्था त्यस्तै हो ?
कम्युनिस्टहरूसँग भिड्न र संगठन बनाउन जिल्ला र क्षेत्रले जसरी कार्यक्रमहरू बढाउनु पर्ने हो त्यस्तो नभएको गुनासाहरू सुनिने गरेका छन् । तर, हामी विपक्षा छौँ । विपक्षमा हुनेवित्तिकै सत्तापक्षमा हुनेभन्दा अझै क्रियाशीलता हुनुपर्ने बढी आवश्यक्ता छ । विभिन्न कामहरू अहिले सत्तामा बस्नेहरूले गरिरहेका हुन्छन् । गलत कामहरू भईरहेका हुन्छन् । त्यसलाई रोक्ने भनेको विपक्षीले हो । हामीहरू अझै क्रियाशील भएर जानुपर्ने अवस्था छ । तर, पनि दाङ कांग्रेसले गतिविधि गर्दै नगरेको अवस्था चाहिँ होइन । कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । मिडियामा नआएको हुन सक्छ । केन्द्रको कारणले पनि गुटलाई प्रभाव परेको छ । केन्द्रमा नै व्यापक गुटबन्दी देखिएको छ । केन्द्रको प्रभाव जिल्लामा पर्नु स्वभाविक छ ।
खुमबहादुर खड्काको अभाव खड्किएको हो ?
हिजोका दिनमा खुमबहादुर खड्काज्यू हुनुहुन्थ्यो । सबैको नेतृत्व उहाँले गर्नु हुन्थ्यो । खुमबहादुर खड्काको अवसानपछि अब दाङमा कसरी नेतृत्व लिने भन्ने खालको दौड पनि धेरैको बीचमा देखिन्छ । हिजो एकातिर भएका व्यक्तिहरू अब कतातिर सेफ हुने ? भन्ने खालले पनि एलाइन्स भईरहेको अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो समय साना कोठे बैठकहरू भएको अवस्था छ । उहाँको अभाव त भैहाल्छ नि ।
दाङ कांग्रेसले जिल्लास्तरमा उठाउनुपर्ने एजेण्डा नै पाएन । के हो त दाङ कांग्रेसको एजेण्डा ? दाङमा कम्युनिस्टहरू हाबी हुँदै गएका छन् । कम्युनिस्टहरूका विरुद्ध जनतालाई भन्ने तपाईहरूले एजेण्डा नै पाउनु भएन है ?
हामीसँग प्रसस्त एजेण्डा छन् । स्थानीयस्तरमा पनि एजेण्डा छन् । हामीले करको कुरा उठाइ रहेका छौँ । कम्युनिस्टहरूले एयरपोर्टको हल्ला गरे । एयरपोर्टका नाममा जनतालाई झुक्काउने काम गर्दैन् । प्रादेशिक राजधानीको कुरा आएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले दाङलाई राजधानी बनाउने भनेर अहिले पछाडि हटेका छन् ।
त्यो कुरालाई पनि दाङ कांग्रेसले जोडतोडका साथ उठाएको छ । कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनका बेला पाँच हजार वृत्त भत्ता बढाएर पाँच हजार पुर्‍याइ घरघरमा ल्याइदिने भनेका थिए । घरमा ल्याउने त के वृद्धि पनि गरेनन् । कांग्रेसले यो कुरा उठाएको छ ।
कम्युनिस्टहरू झुठ हुन्छन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन् । सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चल्नै नसक्ने गरेर विवाद सिर्जना गरिएको छ । दलगत स्वार्थमा सत्तारुढ दलहरूले काम गरेका छन् । तत्कालीन बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धता र घोषणापत्रमा उनीहरूले भनेका कुरा कति पूरा भए कति पूरा हुँदै छन् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले निगरानी गरेका छौँ । दाङ कांग्रेसलाई आफ्नो दायित्व सबै थाहा छ ।
हो जसरी हामी जानुपर्ने हो त्यो रुपमा जान नसकिएको हुन सक्छ । छिटै नै हामीले कार्यक्रम लिएर गाउँ जान्छौँ । लामो समयपछि भरखरै जिल्ला कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ । जिल्ला कार्यसमितिले पनि कार्यक्रम घोषणा गर्ला । महासमितिको बैठक सकिएको छ । त्यसले दिएका निर्देशनलाई पनि गाउँका कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउने दायित्व छ ।
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मैले दाङको विकास गरेको छु । कांग्रेसले केही गर्न सकेको छैन । इतिहाँसकै धेरै बजेट दाङमा भित्र्याएको छु भन्नुभएको छ ? आखिर दाङको विकासका लागि शंकर पोखरेल र कृष्णबहादुर महरा नै चाहिने रहेछ है ?
यसको जवाफ मैले बेलाबेलामा दिने गरेको छु । शंकर पोखरेलजीले नामै लिएर खुमबहादुर खड्काले के गरेका थिए र ? मैले त्योभन्दा धेरै अहिले नै विसका गरिसकेँ भन्नु भएको छ । खुमबहादुर खड्कासँग शंकर पोखरेलले किन दाँज्नु पर्‍यो ? खुमबहादुर खड्कासँग शंकरजीको कुनै पनि तुलना हुँदैन । खुमबहादुर खड्कासँग दाँजेर शंकरजीले एकछिनको न्यानो गर्नुभएको होला । म चार वर्ष मात्रै सांसद बनेको थिएँ । उहाँ पहिला पनि सांसद र मन्त्री बन्नु भएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
मैले ल्याएको जति मात्रै बजेट मेरै सञ्जोगले मेरै निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशमा हुनुहुन्छ । मैले ल्याएको जति मात्रै बजेट ल्याएपनि शंकर पोखरेलजीलाई मैले महान् हुनुहुन्छ भनुला । तर, उहाँले केही गर्न सक्नु हुन्न । मैले जति पनि बजेट ल्याउन शंकरजीले सक्नु भएको छैन । खुमबहादुर खड्काजीको पालादेखिको विकास कार्यक्रम र बजेट जोडेर त शंकरजीलाई कुनै अर्थ छैन ।
अस्तिका चिचिला कम्युनिस्टहरूले खुमबहादुर खड्कासँग नाम जोडेर हुतिहारा कुरा गरेका छन् । यो सुहाउँदैन । आफ्नो हैसियतमा बस्नुपर्छ । खुमबहादुर मात्रै होइन दीपक गिरी सिचाइँ मन्त्री बनेका बेला दाङमा कार्यक्रम र बजेट कति ल्याए त्यो पनि कम्युनिस्टहरूले ध्यान दिनुपर्छ । कांग्रेसका अगाडि हुतिहारा कुरा गर्ने होइन ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजीले दाङमा गएर विकास सबै मैले गरेको हुँ भन्दा कांग्रेसले त विकास गरेको रहेन छ भन्ने भ्रम पर्छ कि पर्दै नि ?
राज्यको सुख सुविधा छ । दलबलसहित जानु हुन्छ । घरमा नेता भेट्न गए जस्तो गर्नुभएको छ । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । कार्यकर्तालाई भेट्न राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग भएको छ । शंकर पोखरेलजीले गरेको एउटा काम देखाइदिनुस् मलाई । शंकरजी मात्रै होइन कृष्णबहादुर महराजी पनि जानु हुन्छ । उहाँले पनि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्नुभएको छ । राज्यको सम्पत्ति दोहोन भएको छ । उहाँहरूले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर जिल्ला घुम्नु हुन्छ । तर, यो–यो ठाउँमा यो कार्यक्रम ल्याएँ भनेर किटान गरेर भन्न सक्नु हुन्न । उहाँहरूले भेगमा यति करोड र यति अर्बको बजेट आयो भनेर मात्रै त भएन नि ।
तपाई पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो तपाईले चाहिँ के गर्नु भयो त ?
हामी संविधानसभामा संविधान बनाउन गएका थियौँ । छोटो समयका लागि सांसद बनेका हौँ । संविधान बनाउने कार्यमा धेरै लाग्नु पथ्र्यो । विकास निर्माणमा धेरै समय दिन सकिएको थिएन । त्यो बेलामा पनि मैले करीव दश वटा पुलहरू मेरो ३ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गरेको छु । बाटो पिच गर्ने काम गरेको छु । बाटो चार लेनको बनाउनेदेखि लिएर सडक विस्तार गर्ने पिच बाटोको कार्यक्रमहरू छन्, सिचाइँका कार्यक्रमहरू, कलेज र स्कूलका भवन बनाउने, खानेपानीका कामहरू गरेको छु । बरु महराजी र शंकरजीले हामीले पारेको कार्यक्रम र योजनाहरूको बजेट काटिदिनु भएको छ । बजेट गएका छैनन् । हामीले लगेका योजनाहरू महरा र पोखरेलजीका कारण अलपत्र परेका छन् ।
कम्युनिस्टहरूले त राजु खनालले केही पनि गरेन भनेर आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
उहाँहरूको काम भनेको कांग्रेसले गरेका काम जो निर्माण सम्पन्न हुँदै छन् तिनीहरूको रिवन काटेर अब उदघाटन गर्ने हो । त्यही काम बाँकी छ । आरोप लगाउने उहाँहरूको काम हो । कम्युनिस्टहरूले गफ धेरै गछन् । काम गर्दैनन् । कांग्रेसले काम धेरै र गफ थोरै गर्छ । बजेट ल्याउने र योजना समावेश गर्ने काम उहाँहरूबाट हुँदैन । नेतृत्वमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । जसरी बजेट र विकास जानु पर्ने हो जान सकेको छैन । गफ मात्रै दिएर जनता झुक्काउन अब सकिनेवाला छैन ।
दाङ कांग्रेसले लामो समयपछि पूर्णता पाएको छ । तर, समावेशी र असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न सकिएन भनेर विवाद छ भन्ने सुनिन्छ कुरा के हो ?
विवादभन्दा पनि केही पर्नै पर्ने साथीहरू छुटेको भन्ने लागेको हुन सक्छ । थारु समुदाय छुटेको मलाई पनि लागेको छ । थारु समुदायबाट राखेको भए राम्रो हुने थियो । विधानअनुसार दलित, जनजातिबाट पर्नु भएको छ । दाङ कांग्रेसका सभापतिले ढिला भएपनि कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनुभएको छ । पुराना र सिनियर नेताहरू पर्नुभएको छ । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन । बरु उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण हामीले बनाइदिनुपर्छ । सधैँ विरोध मात्रै गर्ने भन्दा पनि कांग्रेस बनाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
दाङमा नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित संघलगायतका भातृ संगठनहरू त निस्क्रिय छन् भन्छन् । यी भातृ संगठनहरू बिघठन भएका हुन् ?
केन्द्रमा नेविसंघ विघठन भएको छ । तरुण दलले सानातिना काम गरेको छ । कम्युनिस्टहरू हाबी भएका बेला कांग्रेसको भात संगठनहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेका छैनन् । महिला संघले परम्परागत रुपमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् । तरुण दलले पनि केन्द्रले दिएको कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, संस्थागत रुपमा भातृ संगठनहरूर्लाइ जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो गर्न सकिएको छैन । भातृ संगठनहरूलाई केन्द्रीय राजनीतिले पनि असर गरेको छ ।
दाङ कांग्रेसको सभापतिमा तपाईको पनि चर्चा छ हो ?
चर्चा हुनु स्वभाविक हो । मेरो मनस्थिति अहिलेसम्म बनाएको छैन । केन्द्रीय नेताहरूलाई चाँडै अधिवेशन लागेको जस्ता महशुस गरेको छु । अधिवेशन आउन अझै दुई वर्षभन्दा धेरै समय छ । अहिले नेतृत्वमा जानेभन्दा पनि कम्युनिस्ट सरकारले धेरै ठाउँमा ज्यादति गर्दै अगाडि बढेको छ । सेना परिचालन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विभिन्न विधेयकहरू यी कुरालाई जनताका बीचमा लिएर जाने र कांग्रेसलाई संगठित रुपमा प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त रुपमा प्रतिरोध गर्ने अवस्था पुर्‍याउने बेलामा अहिले नै हामी अधिवेशनको तँ नेतृत्वमा आउने कि म नेतृत्वमा आउने भनेर त्यसमा लाग्ने बेला भएको छैन ।
सभापतिसहित सबै केन्द्रीय सदस्य तलैबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्छ भन्ने माग उठेको छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?
एउटा सल्लाह गरेर जानुपर्छ । कार्यकर्ताको भावना तलैबाट सभापतिसहितका केन्द्रीय नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्छ भन्नेछ । तर, यही विषयलाई लिएर झगडा गर्नुपर्ने म देख्दिन । केन्द्रीय नेता भईसकेको व्यक्ति तलबाट आउन कुनै समस्या हुँदैन । झन् बढी गुटबन्दी गर्छन् कि भन्ने हुन सक्छ । तलबाट आउने कुराले राम्रो हुन्छ । गराउँदा मेरो सहमति छ ।
वडालाई बजेट वितरण सन्तुलित ढंगबाट २०७५ चैत्र १७, आईतवार २२:५०
दाङलाई राप्रपामय बनाउने हामिहरुको दृढ संकल्प छ–कार्यवाहक अध्यक्ष भुपाल रावत २०७५ चैत्र १७, आईतवार २२:५०
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७५ चैत्र १७, आईतवार २२:५०